Zvinoda marii kugadzirisa iyo iPhone kana iPad skrini paApple? | IPhone nhau
Muvhiki rese rapfuura takataura zvakawanda nezve kukanganisa 53, kwakakonzerwa nekugadzirisa sikirini uye / kana bhatani rekutanga re iPhone yedu 6 kana 6 Plus mune isina kubvumirwa sevhisi uye zvakakonzera kuti mudziyo uvharwe zvachose uye usashandisike, pasina kuwanikwa mhinduro yezvino. Iko kushandiswa kweaya asina kufanira masevhisi kwakawedzera zvakanyanya munguva dzichangopfuura nekuda kwekugona kwayo kukuru kune avo vedu vasina Apple Chitoro padyo, nekuti mitengo yacho inofungidzirwa kuti yakadzika zvakanyanya kupfuura muApple. Asi ichokwadi here kuti mitengo iri pasi zvakanyanya kana ichienzaniswa neiyo yepamutemo? Iwe unobhadhara njodzi yenjodzi yekukanganiswa nekurasa zvachose warandi uye kushandisa zvishandiso zvemhando yepamusoro. Ngatione izvo Apple inobhadharisa kune akasiyana ekugadzirisa kune ayo mafaera.
1 IPhone Kugadzirisa paApple
2 IPad Kugadzira paApple
3 Zvakakosha here kutora njodzi?
IPhone Kugadzirisa paApple
Ichi chifananidzo chine mitengo yepamutemo yeApple.es kubva muna Kukadzi 14, 2016. Kuchinja skrini ye iPhone yako 5, 5c uye 5s kune mutengo we € 147,10, unova zvakanaka pamusoro pee € 70 yavakandibvunza mune isiri yevhisi sevhisi ye iPhone yangu 5. Iyo yakapetwa kaviri asi ndinogona kukuvimbisa kuti ini handina kana kugutsikana kana nechidzitiro chavakaisa pandiri, icho chaunogona kuona backlight maLED kumusoro, kana nemhedzisiro yekupedzisira, nechiratidziro chisina kukodzera uye pasina mukana kubva mhinduro. Zvichemo zvangu muofficial technical service yandakazvitora hazvina maturo uye ndakasiiwa ndakagadziriswa zvisina kunaka iPhone 5. Pane mamwe mawebhusaiti ndakaona mitengo inosvika ku € 120 yekugadzirisa.
Mumidziyo yazvino uno mitengo iri pasi zvakashamisa, saka iyo iPhone 6 inodhura € 127,10, uye iyo 6 Plus yakaenzana ne € 147.10 yeiyo iPhone yekare 5. Mutengo wavakandipa mune imwecheteyo sevhisi sevhisi yeiyo iPhone 6 yaive € 120 (isiri-yepakutanga skrini, chete "inoenderana" sekuudzwa kwandakaitwa nenyanzvi). Bhurawuza kuburikidza akasiyana mawebhusaiti ayo ekugadzirisa maPhones ini ndakatarisa zvakanyanya kana zvishoma mitengo yakafanana. Kune mamwe mawebhusaiti anovimbisa kushandisa chete epakutanga zvinhu, mutengo unokwira kusvika ku180 euros. Ini handina kuwana mitengo yekugadzirisa yezvitsva zvitsva zvei iPhone 6s uye 6s Plus. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Apple mitengo inosanganisira € 12 mari yekutumira uye VAT.
Shanduko yebhatiri paApple iri € 79 zvisineyi chishandiso, kune iyo € 12 inofanirwa kuwedzerwa kana kutumirwa kuchidikanwa. Kuchinja bhatiri re iPhone yangu 5 kwakandibhadharira 40 euros muchiitiko chisina mvumo, uye mushure memwedzi mitatu ndakakwanisa kuita kuti isvike masikati neyakajairwa mashandisirwo. Pane iwo mawebhusaiti andakatarisana nawo, mutengo unowanzo kuve wakakomberedza € 60.
IPad Kugadzira paApple
Kugadziriswa kwePad kunosanganisirwa mune imwechete mukana mukati mehunyanzvi sevhisi yeApple.es. Mutengo unosiyana zvichienderana nechishandiso, kubvira € 201,10 yeiyo Mini Mini uye Mini 2 kusvika € 671,10 yeiyo iPad Pro. Zvinosanganisira € 12 mari yekutumira uye VAT. Zvinogoneka kuti nekubata Apple zvakananga uye nekutsanangura nyaya yacho unowana mimwe mitengo zvichienderana nekukuvara kwakakonzerwa. Ngazvive sezvazvingaite, mitengo mune ino kesi yakanyanya kukwirira, kunyanya kana tichifunga kuti mune akawanda maPad modhi achichinja girazi rinokwana kuti zvese zvidzokere kune zvakajairwa, pasina kuchinja LCD pani.
Shanduko yebhatiri ine mutengo mumwe chete we € 99 kune iyo € 12 ichafanirwa kuwedzerwa kana kutumirwa kuchidikanwa. Izvo hazvisi nyore kuwana zvisina kufanira technical services iyo inoshandura bhatiri reApple piritsi, zvirinani kuti handina kuvawana, saka handikwanise kuenzanisa mitengo yavo.
Zvakakosha here kutora njodzi?
Muchiitiko cheiyo iPhone, mhinduro iri pachena: Kwete. Iyo vimbiso yekuti iyo yekugadzirisa inokupa iwe mukati meApple hunyanzvi sevhisi, mutengo uye kusahadzika kwekutanga kwezvishandiso zvinopfuura chikonzero chakaringana chekusarudza Apple pamusoro pemamwe mabasa asina mvumo. Muchiitiko cheiyo iPad chinhu chacho hachina kujeka nekuti Apple haina kusiyanisa pakati pekukuvara kudiki nekukuvara kukuru, uchishandisa mubhadharo mumwechete wekugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Zvinoda marii kugadzirisa iyo iPhone kana iPad skrini paApple?
Iwo mitengo yescreen change .. Iwo ari € 115 iPhone 6 uye € 140 iPhone 6 Uyezve, ini ndaive svondo rapfuura uye mitengo yacho haina kuchinja kana muchitoro chega chega chemaapuro vane mutengo
Antonio Jesu Olmo Ramos akadaro
Neiyo iPad Pro kana iwe uine yakakosha modhi, zvinokurudzirwa kugovana imwe usati wachinja iyo skrini.
Pindura kuna Antonio Jesús Olmo Ramos
Sei munhu wese achinyepa? Apple haigadzirise girazi rePadad, kwete imwe. Apple inoreva nhema, yakaongororwa. ZVAanoita kukupa imwe imwe pamutengo unopenga wekuchinja kwegirazi. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti mutengo wezvinotsiva zvikamu kana unogona kupfuura iwo wekugadzira. Apple haigone kuchinja girazi uye kuchengetedza kuora kwealuminium kubva pakuwa kwayo. Saka iwe unofanirwa kushandura iyo kesi ye aesthetics iyo mutengo wakanyanya zvakanyanya. Iwo ndiwo matambudziko eakashata dhizaini kana uchishandisa yekunamatira kune zvese kana chinenge zvese.
Zvinoita kunge manyepo zvakadii murevi wenhema.